Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii lagu qabtay magaalada Minnesotta iyo xusuustuu ku reebay jaaliyadda Minneapolis
Shirkii lagu qabtay magaalada Minnesotta iyo xusuustuu ku reebay jaaliyadda Minneapolis
Posted by ONA Admin	/ July 11, 2011
Magaalada Minneapolis waxaa lagu qabtay shalay shir aad u balaadhan oo Hogaanka Arimaha Dibada ee JWXO Mudane Cabdriraxmaan Sh Mahdi uu kula kulmey Jaaliyada Ogadeniya ee Gobolka Minnesota.
Maamulka Jaaliyda Ogadeniya ee Minnesota ayaa oo kaashanaya waaxyaha Ururada bulshada ee Jaaliyada ayaa si heersare u soo agaasimay shirka, iyadoo ay si buuxda uga soo qaybgaleen Odey Dhaqameedyada, dhalinyarada iyo Hooyinka Madaalooyinka ah.
Waxyaabaha xusid mudan waxaa ka mid ahaa wiil aad u da’yar oo lagu magacaabo Dalal Ilyaas oo ka mid ah Dhalinta Minnesota ee Ogadeniya oo Gabay uu daqiiqado ka hor alifey shirka ka soo jeediyo. Gabaygaas oo dadweynihii qiiro ku reebey.
Aqonyahan somaliyeed & Gabay
Kadib, waxaa codbaahiyaha lagu soo dhaweyey qaar ka mid ah cuqaashta Ogadeniya ee Gobolka Minnesota, waxaana halkaas hadal qiimo badan oo taariikhi ah ka soo jeediyey Mudane Suldaan Maxamuud Canshuur oo ka mid ah Odey dhaqameedyada Gobolka.. Suldaanka wuxuu sheegay in shacabka Ogadeniya uu aad uga foojiganyahay khiyaanada gumeysiga wado, wuxuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyey in Itooobiya ayna marnaba dooneyn iney si dhab ah xal uga keento dhibaatada ka aloosan ogadenia.
Sidoo kale, Mudane Xuseen Mataan ayaa isaguna goobta kulanka ka soo jeediyey dhiiri gelin iyo khudbad aad u qiimo badan oo dadku ku boorinayey, isaga oo sheegay in Siyaasada Itoobiya ee soo jieenka ah ee ku aadan Ogadeniya ayna weligeed is bedelin. Mudane Xuseen Mataan wuxuu dadweynaha ku booriyey in qof walbaa kaalintiisa buuxiyo.
Waxaa iyaguna Shirka ka hadley Xubno ka mid ah Golaha Dhexe ee JWXO oo ay ka mdi yihiin mudane Axmed Majeerteen, oo isagu shirka ka soo jeediyey khubad uu ugu magac darey “Waa maxay nabadu”. Mudane Axmed Majeerteen ayaa si cilmiyeysan u sharaxay micnaha nabadu leedahay iyo qaabku lagu xalin karo khilaafaadka. Waxaa shirka marti ku ahaa Wafti ka socda Jabhada Oromiya oo uu hogaaminajo Dr. Fido oo ah Madaxa Arimaha Dibada iyo iku xidhka ee Waqooyi Amerika. Dr. Fidow waxa uu sheegay in Shacabka Ogadeniya midka Oromiya ay isaga dhawyhiin kuwa kale ee Itoobiya, isag oo tilmaamery in aynu siku naahay waxa loo yaqaano Kushitik, ila makaana 30% luuada Oromo ay tahay Soomaali. Dr-ka oo meelo badan a hadley iyo qaabka looga hortagi karo xasuuqa ka socda Ogadeniya iyo Oromiya ayaa sheegay in loo baahan yahay in labada qoomiyadood iskaashadaan.
Dr. Fido waxaa hadaladiisii ka mid ah taariikh naxdin leh oo la wadaagey dadweynihii madasha fadhiyey, taariikhdaas ama dhacdadadaas oo dhacdey mudo hada qiyaastii laga joogo 42 sano. Taas oo ku sheegay in ay isku fasal ahaan jireen oo Itoobiyaan ah in markii uu dhameeyey iskuulkii uu ka mid noqdey Ciidamada Itoobiya, islamarkaana loo bedelay Ogadeniya. Dr. Fido weaxa uu yiri “ninii ayaan 6 sano kadib arkey isaga oo aad moodo in maskaxda lagaga jiro, kadib mar aan wareystiiey saaxiibo kale oo ninkan yaqaan, waxaa la ii heegay ‘ In uu Wiil yar oo Hooyadii dhabarka ku wado uu Ogadeniya ku soo diley”, kadibna maskaxda wax kaga dhaceen. Dr. Fido waxa uu intaas u darey in ujeedada uu ninka askariga ahi u diley Ilmaha yar ahayd, in ilmaha yari uusan korin oo beri la daggaalamanin Itoobiya. Qisadan yaa dadweynihii shirka fadhiyy ku abuurtey nacab xoog leh oo ay u sii qaadaan Itoobiya.
Waxaa iyaduna madasha shirka ka hadley Mudane Somaaliyeed oo ka soo kicintintey Magaalada Rochester oo lagu magacaabo Dr. Cabdiramaan Xaaji Erik. Dr. Erik wuxuu aad uga hadley dhibka uu gumeysigu leeyahay iyo nacaybka ay Itoobya u qabto dadka Soomaaliyeed, wuxuuna sheegtey in Itoobiya markasta ka soo horjeedo midnimada Soomaliya. Dr. Cabdiramaan Xaaji Erik ayey khudbadiisii aad u qiiro galisey dhamaan dadweynihii madasha fadhiyey.
Dadweynaha kadib, waxaa shirka si qoto dheer warbixino meelo badan taabanaysa ka soo jeediyey Hogaanka Arimaha Dibada ee JWXO Mudane Cabdiraxmaan Sh Mahdi Yaasiin. Mudane Cabdiraxmaan ayaa si taxanaha ah uga hadley xaalada Geeska Afrika iyo Saameynta ay ku leedahay halgnaka ay JWXO hormuudka ka tahay ee shacabka Ogadeniya aayo katashiga loogu raadinayo.
Warbixinta Cabdiraxmaan ayaa waxaa ka mid ah Filim muujinaya xadgubyada bani’aadamnimada ka baxsan ee Xukumada Wayaanuhu kula kacdo shacabka Ogadeniya.
Sidoo kale, waxa uu mudane Cabdiraxmanaa si qoto dheer uga hadley horumarka JWXO gaadhey ee la xidhiidha xaga Diplomaasiyada iyo Xidhiidhada caalamiga ah ee ay la eedahay Ururada mucaaradka ku ah Itoobiya iyo kuwa aan dawliga ahayn.
Ugu dambeyntii Mudanuhu wuxuu sheegay in JWXO diyaar u tahay in ay miis caalami ah la fadhiisato Xukumada TPLF, laakiiin waa in nabada shacabka Ogadeniya qaadanayo noqoto midi lagu gaadhihahaa ayaakatashiga shacabka Ogadeniya.